Batau APK Download Ho an'ny Android [Nohavaozina 2022] | APKOLL
Batau APK no fampiharana fialamboly Android farany, izay manolotra anao handefa ny sarimihetsika sy andian-tranonkala farany. Manolotra anao izy handefa sarimihetsika na andian-tranonkala. Maimaimpoana ireo fiasa rehetra ireo, midika izany fa tsy mila mandany denaria tokana amin'ny fialamboly ianao.
Araka ny fantatrao dia misy fampiharana hafa eny an-tsena, izay manolotra ireo serivisy ireo. Saingy matetika, izy rehetra dia manolotra ireo serivisy ireo mandritra ny fotoana voafetra. Aorian'ny fe-potoana maharitra dia tsy maintsy mandoa vola ianao amin'ny fampiasana ireo fampiasa amin'ireo fampiharana ireo.
Noho izany, nentinay anao ity rindranasa ity, izay ahafahanao mahazo fialamboly tsara indrindra maimaim-poana, tsy mila mandoa denaria iray akory ianao hahafahanao miditra amin'ireo endriny. Manolotra feon-javatra hafa, izay hozarainay aminao amin'ny topy maso etsy ambany.
Topimaso momba ny Batau APK
Izy io dia fampiharana fialamboly Android maimaim-poana, izay manolotra sarimihetsika, andian-tantara amin'ny Internet, ary horonan-tsary fohy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Manolotra ny Hollywood farany indrindra, Bollywood, ary ireo sarimihetsika navoaka rehetra, izay azonao alefa an-tserasera ary alaina ihany koa.
Ny endri-javatra fampidinana no tsara indrindra satria nanandrana fampiharana marobe izahay. Saingy tsy misy amin'izy ireo manolotra ny fisintomana hisintona ny atiny. Io no hany fampiharana, izay manolotra ny misintona ny atiny tsy misy fiampangana premium.
Ny interface dia tena tsotra hidirana. Ny teny anglisy no tena fiteny, ka mora azo. Tsy mahita fizarana sarotra amin'ity fampiharana ity ianao. Manolotra fizarana dimy lehibe izy io, izay manolotra ny atiny rehetra amin'ity rindrambaiko iray manontolo ity. Mila miditra amin'ilay faritra fotsiny ianao, izay tianao indrindra.
Ny fizarana lehibe voalohany amin'ity IPTV App no farany. Araka ny voalazany ny farany, dia ho hitanao ny angon-drakitra fanampiny farany rehetra ato amin'ity fizarana ity. Izy io dia manome karazana sarimihetsika, tantara an-tsary, na horonan-tsary fohy. Raha vao nohavaozina amin'ny mpizara izy ireo dia ho hitanao ato amin'ity fizarana ity.
Momba ny sarimihetsika ny fizarana faharoa. Manolotra sarimihetsika samihafa avy amin'ny faritra samihafa izy io. Afaka mijery ny Hollywood farany na Bollywood ianao. Manolotra sarimihetsika ho an'ny olon-dehibe ho an'ny olon-dehibe ihany koa izy io, manolotra votoaty ho an'ny olon-dehibe an-taonany maro, ary koa horonan-tsarimihetsika ho an'ny ankizy.
Izy io koa dia manome horonan-tsary fohy, azonao jerena sy ampifalifaliana. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny horonan-tsary fohy dia naoty olon-dehibe. Noho izany, tsy ny karazana video tianao hojerena miaraka amin'ny fianakavianao. Saingy afaka mahita video tsara ihany koa ianao eto.
Manome mpizara marobe izy io hahazoana ny atiny rehetra. Noho izany, dia mahatonga ny fivezivezenao ho tena malama. Afaka misintona haingana kokoa ianao, noho ny fifamoivoizana mizara ho mpizara samihafa. Azonao atao koa ny mijery an-tserasera tsy misy buffing na fanelingelenana.
Izy io dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny Internet, izay manolotra fiasa an-taonina. Noho izany, mahazoa tombony fotsiny avy amin'ny fampiharana ity ary manomboka manao ny andronao feno fialamboly.
anarana Ampidino ny APK 2.0
Anaran'ny fonosana rehetra.solutionnotoapps.batau
Endri-javatra manan-danja amin'ny APK Batau
Niezaka nanonona ireo fiasa rehetra hita ao amin'ity rindrambaiko ity izahay rehetra, fa raha te hizara ny eritreritrao ianao dia aza misalasala mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny lozisialy vitsivitsy amin'ity fampiharana ity aminao izahay.
Malalaka hijerena an-tserasera sy ivelan'ny Internet
Kalitaon'ny horonantsary avo lenta
Ahoana ny fampidinana ny APK Batau?
Izy io dia fampiharana an'ny antoko fahatelo, noho izany dia tsy misy ao amin'ny Google Play Store. Saingy mizara rohy azo antoka izahay hampidinana ity fampiharana ity. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity, izay ho hita eo amin'ny ambony sy ambany ity pejy ity. Tsindrio izany ary miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fisintomana.
Aza adino ny mamela ny 'Source tsy fantatra' avy amin'ny fandaminana mialoha ny fizotry ny fametrahana.
Catau APK no fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika an-tserasera sy zavatra fialamboly hafa maimaim-poana. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa azy. Mitsidika hatrany ny Website ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Batau, Batau APK, Batau App, IPTV App Post Fikarohana